आहा ! रुप्से, फेरि भेटौंला !! – Discovery4p.com
Basanta Maharjan Destination Leaveacomment 575 Views
रुप्से, सुनेको मात्र । उल्लेखनीय झरनाहरुमध्ये एक । देख्न त देखेको तर तस्वीर र भिडियो क्लिप्समा मात्र । पोखराबाट ११० किलोमिटर टाढाको यो झरना म्याग्दी जिल्लाको बेनी भएर मुस्ताङ जाँदा बाटोमै पर्छ, जोमसोमभन्दा करीब ४० किलोमिटर वरै । मुस्ताङ त गएको तर हिडेर होइन, गुडेर पनि होइन, हवाइजहाजबाट । यही भएर रुप्सेको दर्शनबाट बन्चित हुनुपरिरहेको थियो ।
रुप्से जसै नजिक आइपुग्यो, रुप्सेमा भिजेर आएका यात्रुहरू देख्यौं । गाडी रोकेर रुप्से हेर्ने र त्यसमा खेल्नेहरूको भीड नै लाग्दो रहेछ । फोटो खिच्नेहरूको संख्या पनि कम्तीको थिएन । सार्वजनिक यातायातहरू यहाँ रोक्दै नरोक्ने रहेछ । तर रुप्सेको सर्वाङ्ग मात्रै देखेनौं, आफ्नो क्यामेराले भ्यायौं पनि । ९८४ फीट (३०० मीटर) अग्लो यो झरना जब रुप्से कट्यो, झरनामा रुझेको जस्तै अनुभव भयो । तर पनि धित मरेको छैन । रुप्सेलाई छुन पाएन, त्यसमा रुझ्न पाएन । रुप्सेलाई पृष्ठभूमि बनाएर फोटो पनि खिच्न पाएन । तर के भयो र ? फेरि आउने अवसर त छँदै छ । फेरि आउने संकल्प ग¥यौं र भन्यौं, ‘फेरि भेटौंला रुप्से !’
Previous स्मार्ट सिटी होइन, अव ‘इको स्मार्ट सिटी’
Next अन्तरिक्ष यान मङ्गल ग्रहमा अवतरण